Mividiana nomeraon-telefaona ho fanamarinana sms
Mahazo hafatra SMS
hisoratra anarana amin'ny tranonkala rehetra
Mifandraisa aminay Login
Laharana finday vonjimaika handraisana SMS
Mahazo hafatra SMS hisoratra anarana amin'ireo tranonkala
Laharana finday virtoaly ho an'ny sms
Mividy nomeraon'ny sms Mampidira mailaka tena izy, mamorona kaonty
ary mahazoa nomeraon'ny SMS.
Te-hisoratra anarana kaonty ianao nefa mitaky fanamarinana
Ny serivisinay dia hanome anao nomeraon-telefaona hialana amin'ny fanamafisana ny SMS . Azonao ampiasaina izany raha te handray SMS misy kaody fanamarinana.
Ny lahatsoratra misy kaody fanamarinana dia halefa amin'ny isa nofidinao ary haseho ao amin'ny kaontinao manokana amin'ny tranokalanay.
Ankehitriny ianao dia afaka misoroka ny fampiasana ny nomeraonao manokana hamoronana kaonty na hisoratra anarana amin'ny tranokala.
Ny isa nohofana dia hanampy anao hanamarina amin'ny toerana na serivisy rehetra. Raiso ireo hafatra SMS an-tserasera ao anatin'ny 1 minitra fotsiny.
80 + firenena dia misy amin'ny serivisinay hahazoana nomerao virtoaly avy amin'i: Alemana, Etazonia, Rosia, Sina, Indonezia, Japan, France ary maro hafa. Amin'ny ho avy, firenena hafahafa kokoa no homena hanofa isa virtoaly.
Laharana finday mandritra ny 20 minitra
Mandefa hafatra an-tsoratra miditra fotsiny ianao. Mandritra io fotoana io dia misy hafatra SMS tsy voafetra azo alefa amin'ny isa voafantina.
Ny isa dia azo ampiasaina hampiasana ny serivisy rehetra voatanisa ao amin'ilay tranokala. Safidio ilay ilainao ary raiso ny fanamafisana SMS amin'ny nomeraon-tseraserao. Avy eo kopia ny kaody SMS ary apetaho amin'ny tsipika mety rehefa misoratra anarana ny kaontinao.
API ho an'ny mpamorona
Atambaro ny fampiharana anao, mahazoa isa ho an'ny hafatra SMS. Mahazoa SMS an'arivony isa-minitra ary misoratra anarana kaonty afaka segondra! Ampiasao ny SDK ho fampidirana haingana sy tsotra amin'ny API misy multreadread.
Ampiasao ny laharanay hiarovana ny fiainanao manokana - aza omena ny anao.
Aza avela hamidy ny mombamomba anao manokana ny orinasa.
Énkripsi mahery ho an'ny fivoriana an-tserasera rehetra.
Mampiasà nomerao vonjimaika ho an'ny fisoratana anarana
SMSVERIFY mety raha hisoratra anarana:
Ny mpampiasa dia afaka manamarina ny tambajotra sosialy toy ny
ary tambajotra sosialy hafa.
Kaonty eny an-tsena
Kaonty amin'ny mpitondra hafatra
Facebook, Snapchat, Skype, Line, Tencent, QQ sy ny hafa.
mailaka sy kaonty
Manolotra fanamarinana izahay (Gmail, Google feo,
Kaonty Microsoft, mailaka Yahoo) Mahazo hafatra SMS ho an'ireo tranonkala sy serivisy
Ahoana no fiasan'izany?
Miara-miasa amin'ireo mpitatitra finday nasionaly izahay hanomezana anao fidirana amin'ny laharana finday monina any Etazonia.
Amin'ny alàlan'ny serivisinay, azonao atao ny mangataka fidirana amin'ny nomeraon-telefaona sy mampiasa io isa io handraisana hafatra SMS.
Hafatra mivantana amin'ny kaontinay ny hafatra.
Tena nomerao finday ve ny isa?
Eny, isa finday tena izy ireo. Tsy virtoaly izy ireo ary azo ampiasaina hanamarinana ny serivisy, sehatra na tranokala mampiasa lahatsoratra na fanamarinana antso. Miara-miasa amin'ny mpamatsy finday izahay mba hahafahanao mangataka fidirana amin'ny nomeraon-telefaona tena izy handraisana hafatra SMS. Halefa mivantana amin'ny kaontinay ny hafatra.
Ny vidin'ny SMS voaray dia manomboka amin'ny $ 0,01. Afaka mahazo isa maimaim-poana ianao. ', 'faq_item_title_4' => 'Firy ny isanao? (Tsy manam-paharoa ve izy ireo? Moa ve ny mpampiasa hafa mahazo isa mitovy amin'ny fampiasako azy?)
Сколько у вас номеров? (Они уникальны? Получают ли другие пользователи тот же номер, что и я?)
Ianao irery ihany no nomena ny isa. Izahay dia tsy mamerina ny isa mitovy indroa.
Ahoana no ahafahako mampiasa nomeraon-telefaona virtoaly handraisana hafatra SMS amin'ny Internet?
Mba handraisana SMS amin'ny nomeraon-telefaona virtoaly amin'ny serivisinay dia mila:
Misafidiana firenena amin'ny lisitra misy amin'ny tranokala.
Misafidiana mpandraharaha finday (raha zava-dehibe aminao izany).
Safidio ny tranokala na serivisy tianao hampandeha kaonty.
Avy eo kopia ny isa ary ampiasao handraisana hafatra SMS avy amin'ilay tranonkala voafantina.
Afaka minitra vitsy dia hahazo SMS na kaody SMS amin'ny pejy mifandraika amin'ny serivisinay SMS ianao.
Fantatrao izao ny fomba handraisana hafatra SMS tsy misy telefaona amin'ny alàlan'ny fampiasana ny nomeraon-telefaona vonjimaika.
smsVERIFY.PRO Namboarina tamin'ny any Russia
Copyright © 2020 SmsVerify. Zo rehetra voatokana.
Fampahalalana momba ny cookie
Ampianaro izahay hanatsara ny serivisy. Azafady mba lazao izay lesoka hita tamin'ny fandikan-teny tamin'ny mailaka anay: smsverify.pro@gmail.com